Klopp: Liverpool way ka qaalib noqon kartaa khibradda Real Madrid - BBC News Somali
Klopp: Liverpool way ka qaalib noqon kartaa khibradda Real Madrid
James Milner iyo Jurgen Klopp
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa rumaysan in "rabitaanka, hab dhaqanka iyo tayada qaab ciyaareedka" kooxdiisa Liverpool ay ka qaalib noqon doonto khibrada 12ka jeer ah ee ay Real Madrid u leedahay koobka Horyaallada Yurub.
Liverpool oo shan jeer ku guulaysatay koobkan ayay foodda is dari doonaan kooxdan wayn ee reer Spain oo isku dayaysa in ay koobka Champions League hanato markii saddexaad oo xiriir ah, marka ay ciyaarta kama dambaysta ah ka dhacdo magaalada Kiev Sabtida soo socota.
Waa markii koobaad ee ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan soo gaarto kooxdan Ingiriiska ka socota ee lagu naanayso Reds tan iyo sannadkii 2007dii.
"Real Madrid way naga khibrad badan tahay" ayuu yiri Klopp. "Khibtraddu nolosha muhiim ayay u tahay, balse waxa kali ah ee loo baahan yahay ma aha."
Wuxuu intaas ku daray: "waxaa la barbardhigi karaa, rabitaanka iyo tayada qaab ciyaareedka, taasina waa sababta aan u jeclahay Kubbadda Cagta.
"Maxammad Salaax wuxuu ku dayasho Wanaagsan u yahay Muslimiinta sida aniga oo kale"
Klopp ayaa kooxdiisa ugu baaqay in ay "geesiyiin" noqdaan ayna u dheelaan sidii ay u ciyaareen markii ay iska horyimaaddeen kooxda Manchester City oo horyaalka Ingiriiska hanatay oo ay ku reebeen wareegga siddeedda ee koobkan iyo kooxda Rome oo ay ka soo badiyeen wareeggii rubac dhammaadka.
"Waxaan si wanaagsan isugu dayi doonnaa in aan wiilasha tusno sababta ay macnaha wayn u samayso geesinimadu," ayuu yiri Klopp. Ma sahlanayn in aan geesinimo muujinay markii aan wajahnay Manchester City, mana sahlanayn in aan geesinimo muujinay markii aan wajahnay Roma. Laakiin wiilashu sidaa ayay sameeyeen ayuu yiri Klopp.